Xayiraadaha qaadista safarada caalamiga ah ee USA ayaa lagu booriyay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Xayiraadaha qaadista safarada caalamiga ah ee USA ayaa lagu booriyay
Airlines • Airport • Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Toddobaad kasta oo xaddidaadda socdaalku sii jirto, dhaqaalaha Mareykanka wuxuu luminayaa $ 1.5 bilyan oo ah kharashka ka baxa Kanada, Midowga Yurub, iyo Boqortooyada Midowday — lacag ku filan oo lagu taageero 10,000 oo shaqo Mareykan ah.
Xaddidno xaddidaadda gelitaanka ee waddamada halista ugu badan leh oo keliya.
Ku beddel dhammaan xayiraadaha safarka bustaha oo lagu rakibo qaab-maamuusyo soo-gal ah oo ku saleysan qiimeyn halista waddan-waddan iyo shaqsi kasta.
Hubso in qaabdhismeedka uu fududahay in la fahmo, lala xiriiro, lana hirgeliyo.
Isbaheysi ka kooban 24 urur ganacsi oo matalaya dhinacyo badan oo kala duwan oo dhaqaalaha Mareykanka ah ayaa cusbooneysiinaya wicitaanada deg degga ah si loo qaado xayiraadaha saaran booqashada caalamiga ee United States, Arbacadiina waxay soo saartay qorshe siyaasadeed oo dib loogu furayo xuduudaha si nabdoon.
Waxaa loo yaqaan "Qaab-dhismeedka Xaddidaadda gelitaanka Ammaan ee Safka iyo Dib-u-billowga Safarka Caalamiga ah," dukumiintiga ayaa tilmaamaya mabaadi'da siyaasadeed ee ugu dambeyn lagu soo dhaweynayo booqdayaasha caalamiga ah ee ku soo laabanaya Mareykanka iyadoo la ilaalinayo caafimaadka iyo nabadgelyada mudnaanta koowaad.
"Warshadaha safarka waxay isku raaceen in hagida cilmiga sayniska gabi ahaanba ay tahay dariiqa saxda ah, cilmiguna wuxuu in mudo ah noo sheegayay inay macquul tahay in la bilaabo in si nabad galyo leh dib loogu furo safarada caalamiga ah," Ururka Socdaalka Mareykanka Madaxweynaha iyo agaasimaha guud Roger Dow. “Dukumintigeenu wuxuu sii wadaa inuu mudnaanta siinayo amniga iyadoo la siinayo khariidad lagu xaliyo balaayiin doollar oo waxyeello dhaqaale oo ka dhalatey xaddidaadda sii socota ee ka gudubka xuduudahayaga, gaar ahaan dalalka xulafada la ah heerarka tallaalka ee la midka ah Waxaan leenahay aqoon iyo qalab aan ugu baahanahay inaan dib ugu bilawno safarka caalamiga ah si nabad galyo ah, waana waqtigii lasoo dhaafay inaan isticmaalno. ”
"Diyaaradaha Mareykanka waxay ahaayeen - oo ay sii ahaanayaan - u-doodayaal xoog leh oo ku wajahan halista ku saleysan, habka loo wado xogta si nabad ah dib loogu soo celiyo safarka caalamiga ah sida ku cad qorshaha," ayuu yiri Airlines Madaxweynaha Mareykanka iyo Agaasimaha Guud Nicholas E. Calio. “Waxaan u tiirsanaanay cilmiga dhamaan dhibaatadan, cilmi baaristuna waxay si isdaba joog ah u go'aamisay halista gudbinta diyaaradaha. Xaqiiqdii, Hindisaha Caafimaadka Dadweynaha ee Harvard ayaa soo gabagabeeyay in diyaaradda la raaco ay amaan tahay haddii aan laga badbaadinaynin waxqabadyada caadiga ah sida cunnada makhaayadda ama tagista dukaanka raashinka. Sayniska waa cad yahay - waxaa la joogaa waqtigii, hadaanay ahayn waqtigii la soo dhaafay, in Dowlada Mareykanku ay talaabo qaado oo ay dib u furto safarka u dhexeeya Mareykanka iyo wadamada halista yar.